အထူးပြုလုပ်ထားသောရှားပါးအင်္ဂါရပ်များဖြင့်စမတ်ဖုန်း ၅ ခု | Androidsis
အထူးပြုလုပ်ထားသောရှားပါးအင်္ဂါရပ်များဖြင့်စမတ်ဖုန်း ၅ ခု
Cristina Torres နေရာချထားပုံ | | မိုဘိုင်း
မိုဘိုင်းဆိပ်ကမ်းများ စျေးကွက်တွင်ပိုမိုများပြားလာသည်နှင့်လူသိအများဆုံးအကွာအဝေးကိုနှစ်စဉ်ပြန်လည်သက်တမ်းတိုးခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့သည်များစွာသောသူတို့ကိုမေ့သွားသည်သို့မဟုတ်မူလနှင့်ကိုက်ညီမည့်နေရာမရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ကွဲပြားခြားနားမှုရှိခြင်းသည်နည်းပညာလောကတွင်အမြဲတမ်းဆုတစ်ခုမဟုတ်သကဲ့သို့ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့လည်းဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဘယ်လိုလဲ? ကြော်ငြာအားလုံးမှာပေါ်မလာသေးတဲ့လူတွေအကြောင်းပြောတဲ့ပုံစံတွေမဟုတ်ပေမယ့်တချို့သောမော်ဒယ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုပြသခြင်းအားဖြင့်သူတို့ဘယ်လောက်ထူးခြားသလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။
သင်ကတစ် ဦး ဖြစ်နိုင်သည် မိုဘိုင်းကမ္ဘာ၏ပန်ကာအချို့ကသင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေပြီဖြစ်သည် သို့မဟုတ်အချို့သည်သင်ဆန္ဒရှိစာရင်းတွင်သင်စာရင်းသွင်းမည့် terminal ပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, မူရင်းဖြစ်ခြင်းသည်အမြဲတမ်းလက်တွေ့ကျသည်ဟုမဆိုလိုပါ၊ ဤမော်ဒယ်များမှပြုလုပ်သောဝေဖန်မှုများသည်မည်မျှတီထွင်ဖန်တီးမှုရှိသော်ငြားလည်းအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကိုမပေးသောသဘောဖြင့်တရားမျှတမှုရှိသည်။ အချို့သောသူတို့သည်သင်တို့၏ရှားရှားပါးပါးဖြစ်ရပ်များကိုအချို့သောအခါသမယများတွင်သာအသုံးပြုကြလိမ့်မည်။ အချို့သည်သူတို့၏အထူးသဖြင့်ပုံသဏ္toာန်ကြောင့်လုံးဝပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိသောပြproblemsနာများရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အသစ်တစ်ခုကိုသင်ရှာဖွေလိုပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူဤရှားပါးသောဆိပ်ကမ်း (၅) ခုကိုသိရန်နေပါ။
1 LG က G Flex ကို 2
2 Oppo N3
5 Yotaphone 2
LG က G Flex ကို 2
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းအတွက်ရွေးချယ်ထားသောမော်ဒယ်ငါးလုံးအနက်လူသိအများဆုံးဖြစ်သည့်တစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့စတင်သည်။ သူ့ရဲ့ကွေးကောက်မျက်နှာပြင်ဟာစျေးကွက်မှာအတော်များများဖြစ်လာနေပေမယ့်အမြဲတမ်းတော့အဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်, အပေါ်တွင်လောင်းသောသူသည်စားသုံးသူ LG က G Flex ကို2ထို့အပြင်၎င်း၏ထူးခြားချက်များက၎င်း၏ပုံသဏ္iselyာန်အတိအကျကြောင့်သိုလှောင်ထားသည့်အခါသော့များကိုအိတ်ကပ်ထဲ၌တစ် ဦး တည်းနှိပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုယူဆသည်။ ဒါကသူတို့သိပ်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။
selfie ကိုနှစ်သက်သောသမားရိုးကျမဟုတ်သောမော်ဒယ်လ်ကိုယနေ့ဆန်းသစ်တီထွင်။ ကျော်ကြားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့်ကုမ္ပဏီကိုအံ့အားသင့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏လှည့်ကင်မရာသည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်၊ သူတို့၏ resolution တွင်လိုချင်သောအရာများစွာကျန်ရှိစေသည့်ဂန္ရှေ့ကင်မရာများထက် ပို၍ လွယ်ကူစေသည်။ မင်းမသိသေးဘူး Oppo N3?
ရှားပါးသောသူမရှိ၊ ဒီစမတ်ဖုန်းဟာအသွင်အပြင်ရှိပြီးသင့်ရဲ့အသိပေးချက်တွေကိုပြသဖို့အဆိုပြုချက်အသစ်တခုလည်းရှိတယ်။ လုပ်နိုင် သင်မလိုချင်သည့်အခါ၎င်းသည်တုန်ခါခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ခြင်း၊ ထို့အပြင်သင့်ထံရောက်ရှိလာသောအရာအားလုံးကိုသိလိုစိတ်ပြင်းပြသောဗီနင်ပုံစံဖြင့်ပြသည်။
အခြားဂြိုဟ်တစ်ခုမှယူဆောင်လာပုံရသောအံ့မခန်းဖွယ်ဒီဇိုင်းအပြင်၊ ဤမိုဘိုင်း terminal ကိုသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောအရာသည်၎င်းကိုခံနိုင်ရည်အရှိဆုံးသောပစ္စည်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီကမူ၎င်းကိုမူပိုင်ခွင့်ပြုထားပြီးမည်မျှအနည်းငယ်သာသိရသော်လည်းယူရို ၈၀၀ ကျော်ဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်။
နောက်တစ်ခုကိုပြမယ့်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ဒုတိယ version နဲ့အဆုံးသတ်လိုက်တယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေကိုသုံးပါ။ ရိုးရာနှင့်အီလက်ထရောနစ်စာဖတ်သူများကဲ့သို့သောဖန်သားပြင်နှစ်ခုကသူ့အားဆိပ်ကမ်းအမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ရန်နှင့်လူအများရှေ့တွင် ဆက်၍ လောင်းနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » အထူးပြုလုပ်ထားသောရှားပါးအင်္ဂါရပ်များဖြင့်စမတ်ဖုန်း ၅ ခု
Nexus 6P ရဲ့ကြီးမားတဲ့ ၀ င်းဒိုးအကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
Android 6.0 Marshmallow ၏ကောင်းကျိုးနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ